चुनाव सम्भव छैन –विज्ञहरू
काठमाडौं, २१ माघ। आगामी वर्षको मंसिर महिनायता संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नभएको यस क्षेत्रका ज्ञाताहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय निर्वाचन परिवेक्षक अवलोकन समितिद्वारा आइतबार आयोजित 'निर्वाचनको अपरिहार्यता र संवैधानिक गतिरोध' विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले वि.स. २०७० को जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसकिने बताएका हुन्।
निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुनी एवम् व्यावहारिक प्रक्रिया पूरा गर्न अब नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले निस्पक्ष र निकाससहितको निर्वाचन आगामी मंसिरअघि सम्भावना नभएको उल्लेख गरेका छन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भन्नुभयो– “आगामी मंसिरभन्दा अघि चुनाव सम्भव छैन, जेठमा चुनाव गर्ने कुरा नगरौं।”
आफू निर्वाचनको विरोधी नभएको चर्चा गर्दै उहाँले निकाससहितको निर्वाचनका लागि प्राविधिक एवम् मनोवैज्ञानिक वातावरण तयार नभएको अवस्थामा चुनाव गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी नगरी चुनावमा जान नसिकने बताउँदै भन्नुभयो– “अहिले नेपालमा मतपत्रसमेत छाप्न सकिने अवस्था छैन, कानुनी एवम् अन्य तयारी नभएको अवस्थामा चुनाव गराउन सकिने अवस्था छैन।”
अर्का पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले कानुनी एवम् प्राविधिक तयारी गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै चुनावपछिको अवस्थाका विषयमा आङ्कलन नगरी चुनावमा जान नहुने उल्लेख गर्नुभयो। संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाको निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको चर्चा गर्दैै सहमति गरेर चुनावी सरकारमा जान राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे र हरिहर विरहीले व्यापक सहमतिको वातावरण सिर्जना नगरी निर्वाचनमा गए त्यसले अझै द्वन्द्वलाई बढाउने बताउनुभयो।